ကိနျးဂဏနျးမြား၏ စှမျးအားနှငျ့ ယူဆခကျြမြား
ကိနျးဂဏနျးမြားနဲ့ပတျသကျပွီး သငျက မညျသညျ့လူမြိုး၊ မညျသညျ့နိုငျငံတှငျ နထေိုငျသညျဆိုသညျ့အခကျြပျေါမူတညျပွီး ကှဲပွားတဲ့အဓိပ်ပာယျမြား ရှိပါတယျ။
ကိနျဂဏနျး နံပါတျ တဈခုဟာ နိုငျငံတဈခုအတှကျ ကံကောငျးစပေမေယျ့ အခွားနိုငျငံအတှကျတော့ ကံဆိုးစတေဲ့နံပါတျ ဖွဈနပွေနျပါတယျ။
ဗဟုသုတအနနေဲ့ လလေ့ာမှတျသားနိုငျရနျ နိုငျငံနဲ့ လူမြိုးအလိုကျယူဆထားတဲ့ ကိနျးဂဏနျးမြားရဲ့အဓိပ်ပာယျကို စုစညျးတငျပွလိုကျပါတယျ။
တရုတျနိုငျငံမှာဆိုရငျတော့ (၄) ဂဏနျးကို ကံမကောငျးစတေဲ့နံပါတျအဖွဈ လကျခံထားကွပါတယျ။ (၄) ဆိုတဲ့ဂဏနျးဟာ တရုတျအသံထှကျအရ သဆေုံးခွငျးဆိုတဲ့ ဝေါဟာရနဲ့ တူနတေဲ့အတှကျကွောငျ့ပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ တရုတျနိုငျငံမှာဆိုရငျ (၄)နဲ့ပတျသကျတဲ့ အရာတှကေို လဈြလြူရှုထားလရှေိ့ကွပါတယျ။ အခနျးနံပါတျ၊ တိုကျနံပါတျ၊ ဓာတျလှကေား …….။ အဓိကအားဖွငျ့ ဟိုတယျတှမှောဆိုရငျ (၄) (၁၄) (၂၄) အစရှိတဲ့ အခနျးနံပါတျတှေ၊ အလှာတှကေို အခွားနံပါတျ (ဥပမာ ၄လှာကို (F Flr) အစရှိသဖွငျ့) အစားထိုးအသုံးပွုလရှေိ့ကွပါတယျ။ ကားနံပါတျတှမှောဆိုရငျလညျး (၄)နံပါတျပါတဲ့ ကားတှကေို ရှောငျပွီး ဝယျယူလရှေိ့ကွပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဂြာမနျလူမြိုးတှအေတှကျကတော့ ကံကောငျးစတေဲ့နံပါတျပါတဲ့။ အရှကျလေးရှကျပါတဲ့ Clover ရှကျလေးတှကေို ကံကောငျးစတေဲ့သင်ျကတေအဖွဈ အသုံးပွုလရှေိ့ကွတယျ။
ဂပြနျလူမြိုးတှအေတှကျတော့ (၉) ဂဏနျးဟာဆိုရငျ ကံမကောငျးစတေဲ့ နံပါတျပါ။ နှိပျစကျခွငျး၊ ဆငျးရဲဒုက်ခ အစရှိတဲ့စကားလုံးတှရေဲ့ အသံထှကျနဲ့တူတဲ့အတှကျပဲဖွဈပါတယျ။ ဆေးရုံတှေ၊ လကွေောငျးလိုငျးတှမှောဆိုရငျ နံပါတျ(၉)ကို ရှောငျရှားလရှေိ့ကွပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး တရုတျလူမြိုးတှအေတှကျတော့ နံပါတျ(၉)က ကံကောငျးစတေဲ့နံပါတျဖွဈပါတယျ။ ပွီးပွညျ့စုံခွငျးလို့ ယူဆကွတယျ။ ဒဏ်ဍာရီလာပုံပွငျတှထေဲမှာဆိုရငျလညျး ဒီနံပါတျ(၉)က စိုးမိုးထားတယျ။ ဥပမာ စှမျးအားကွီးမားလှတဲ့ အမွီး(၉)ခြောငျးပါတဲ့ ဝံပုလှပေေါ့….
အီတလီလူမြိုးတှအေတှကျတော့ (Friday – 17) ကတော့ ကံမကောငျးစတေဲ့နံပါတျပါ။ ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ ရောမနံပါတျ XVII ကို ပွနျပွောငျးပွီး အစီအစဉျခလြိုကျမယျဆိုရငျ VIXI ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ရရှိမှာပဲဖွဈပါတယျ။ “ငါ့ဘဝကုနျဆုံးပွီ” လို့ လကျတငျဘာသာစကားနဲ့ အဓိပ်ပာယျရပါတယျ။
နျောဝေ၊ ဆှီဒငျနဲ့ ယူကကေဲ့သို့သော ဖှံ့ဖွိုးပွီးနိုငျငံမြားအပါအဝငျ ကမ်ဘာအနှံ နိုငျငံမြားစှာမှာတော့ (၁၃)သညျ ကံမကောငျးတဲ့ နံပါတျတဈခုအဖွဈ မှတျယူပွီး ရှောငျရှားကွတယျ။ ယရှေုခရဈ၏ (၁၃)ယောကျမွောကျ သာဝက “ယုဒရှကာရုတျ - Judas Iscariot” သညျ ယရှေုကို သစ်စာဖောကျခဲ့သညျ။ ယရှေုသခငျအား ၁၃ရကျနေ့ (သောကွာနတှေ့ငျ) ကားတိုငျတငျသတျမှုပွုလုပျခဲ့သညျ့ နဖွေ့ဈခဲ့သညျ။
အငျဒီးယနျးမြားအတှကျကတော့ (၂၆)ကို ရှောငျရနျ မညျသညျ့အရာကိုမဆို ကွိုးစားကွပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ ကွကှေဲဖှယျအဖွဈအပကျြအမြားကွီးက ဒီ (၂၆)ရကျနမှေ့ာ ဖွဈပှားခဲ့လို့ပါပဲ။ အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုတှေ၊ ဆူနာမီနဲ့ မွငေလငျြတှေ….
အာဖဂနျနစ်စတနျမှာတော့ နံပါတျ(၃၉)ကို ကံမကောငျးဘူးလို့ သတျမှတျကွတယျ။ သူတို့ရဲ့ ဒသေိယစကားအရ “Morda-gow” (Dead Cow) နဲ့ အသံထှကျ ဆငျနတေဲ့အတှကျကွောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
ခရဈယာနျဘာသာကို ကိုးကှယျတဲ့တိုငျးပွညျတှမှောတော့ ကမျြးစာရဲ့ဗြာဒိတျတျောမှာဖျောပွထားတဲ့ သားရဲ (Antichrist (အန်တိခရဈ)) ကို ကိုယျစားပွုတဲ့ နံပါတျ (၆၆၆) ကို နိမိတျဆိုးလို့ ယူဆကွပါတယျ။ ၆၆၆ အရအေတှကျကို ကွောကျရှံခွငျး (Hexakosioihexekontahexaphobia) လို့ ချေါပါတယျ။
ဖုနျးနံပါတျ 0888 888 888
လူတျောတျောမြားက နံပါတျတှထေပျနတေဲ့ ဖုနျးနံပါတျတှကေို လိုခငျြကွပမေယျ့ ဘူဂေးရီးယားမှာတော့ အဲ့ဒီလိုမဟုတျပါဘူး။ ဒီလိုဖုနျးနံပါတျတှဟော ကနျြဆဲခွငျးခံရသော ဖုနျးနံပါတျတှဖွေဈတယျေလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒီလိုဖုနျးနံပါတျရှိသူအခြို့ ပြောကျကှယျသှားတတျကွတယျလို့ ယုံကွညျကွပါတယျ။
လူအမြားစုက နံပါတျ(၃)က ကောငျးသောအရာမြားစုဝေးနတေယျလို့ ယူဆကွတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဆီဒငျ၊ ကိုရီးယား လူမြိုးတှဟော နံပါတျ(၃)ဟာ သူတို့အတှကျ ကံကောငျးခွငျးမြားစုနတေဲ့ နံပါတျအဖွဈ မှတျယူကွတယျ။ ကိုရီးယားလူမြိုးတှကေ နံပါတျ(၃)သညျ မွနှေငျ့ကောငျးကငျကို ထိနျးခြုပျခွငျးသင်ျကတေ - (၁) က ကောငျးကငျကို ကိုယျစားပွုပွီး (၂)က မွကွေီး (ကမ်ဘာ)ကို ကိုယျစားပွုသညျ။ ထို (၁+၂) ပေါငျးလိုကျလြှငျ နံပါတျ(၃)ရသညျ။
အီတလီလူမြိုးမြားအတှကျ နံပါတျ(၃)သညျ ဟနျခကျြ (Balance) + စှမျးအား (Strength) အား ကိုယျစားပွုသညျ့ တွိဂံတဈခုအဖွဈ ကိုယျစားပွုကွသညျ။
သို့သျော ဂပြနျနှငျ့ ဗီယကျနမျတို့တှငျ လူ(၃)ဦး အတူ ဓာတျပုံရိုကျကူးခွငျးကို ရှောငျကွဉျကွသညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသော ထိုသို့ဓာတျပုံရိုကျကူးလြှငျ ဓာတျပုံအလယျရှိ မညျသူမဆို သကွေလိမျ့မညျဟု ယုံကွညျသောကွောငျ့ဖွဈသညျ။
ဂပြနျ၊ တရုတျကဲ့သို့သော နိုငျငံမြားတှငျ နံပါတျ (၇)ကို ကံကောငျးခွငျးဟု ဆိုကွသညျ။ ထို့အတူ နယျသာလနျ၊ ပွငျသဈ၊ ယူကေ နှငျ့ အမရေိကနျနိုငျငံ အစရှိသော အနောကျနိုငျငံမြားတှငျ (၇)မှာ ကံကောငျးသညျဟု ယူဆကွသညျ။ ဂွိုဟျ(၇)လုံး၊ အံ့ဖှယျ(၇)ပါး နှငျ့ စင်ျကွာဝဠာတဈခုလုံးကို ဖနျတီးရနျ (၇)ရကျ …. အစရှိသညျတို့နှငျ့ ဆကျစပျနသေောကွောငျ့ဖွဈသညျ။
သို့သျော တရုတျသွဇာလှမျးမိုးမှုရှိသော ထိုငျးနှငျ့ဗိယကျနမျတို့တှငျ (၇)သညျ ကံမကောငျးသော နံပါတျဖွဈသညျ။ နံပါတျ(၇)သညျ ဇူလိုငျလကို ကိုယျစားပွုပွီး သဆေုံးသူ မိတျဆှေ၊သူငယျခငျြး၊ ဆှမြေိုးမြားအား အမှတျတရနှငျ့ အခွားသူမြားကို မခွောကျလှနျ့နိုငျအောငျ မြှျောလငျ့ခကျြဖွငျ့ အစားအစာမြား၊ အသီးအနှံအမြိုးမြိုးနှငျ့ အောငျ့မပှေဲ့မြား ပွုလုပျရသညျ့ လ (ဇူလိုငျလ) ဖွဈသောကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
ဟိန်ဒူ၊ ဗုဒ်ဓ၊ ဂြူး၊ ခရဈယာနျ၊ အစ်စလာမျနှငျ့ တိုအိုဘာသာ အပါအဝငျ ကမ်ဘာအနှံအပွားရှိ ဘာသာတရားမြားစှာသညျ (၈)ကို အကြိုးဖွဈထှနျးစသေော အရအေတှကျဟု ယူဆကွသညျ။ တရုတျလူမြိုးမြားသညျ နံပါတျ(၈) ကို အထူးနှဈသကျကွသညျ။ ခမျြးသာကွှယျဝမှု ဆိုသညျ့ ဝေါဟာရနှငျ့ အသံထှကျဆငျတူသောကွောငျ့ဖွဈသညျ။ နံပါတျ(၈)နှငျ့ပိုငျဆိုငျမှုမြားသညျ အလှနျအဖိုးတနျသော ပိုငျဆိုငျမှုမြားဖွဈသညျ။ ဥပမာ ပကေငျြးတှငျ ကငျြးပသော ၂၀၀၈၊ သွဂုတျလ နှရောသီအိုလံပဈပှဲတျောကို 08း08း08) ဒသေစံတျောခြိနျတှငျ စတငျခဲ့သညျ။
ဂပြနျနိုငျငံတှငျလညျး (ya or hachi) လို့ ချေါတဲ့ ကံကောငျးခွငျးလို့ ယူမှတျကွတယျ။ ကံ+ပေါငျးသငျးခွငျး ကို ကျိုာစားပွုသညျ့ ဂပြနျစကားလုံးမြားနှငျ့ ဖှဲ့စညျးထားခွငျးကွောငျ့ဖွဈသညျ။
ကဲ မိတျဆှတေို့ရဲ့ ကံကောငျးစတေဲ့၊ ကံမကောငျးစတေဲ့ နံပါတျတှကေရော ဘာတှလေညျး????
ကိန်းဂဏန်းများ၏ စွမ်းအားနှင့် ယူဆချက်များ
ကိန်းဂဏန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်က မည်သည့်လူမျိုး၊ မည်သည့်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်သည်ဆိုသည့်အချက်ပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားတဲ့အဓိပ္ပာယ်များ ရှိပါတယ်။
ကိန်ဂဏန်း နံပါတ် တစ်ခုဟာ နိုင်ငံတစ်ခုအတွက် ကံကောင်းစေပေမယ့် အခြားနိုင်ငံအတွက်တော့ ကံဆိုးစေတဲ့နံပါတ် ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။
ဗဟုသုတအနေနဲ့ လေ့လာမှတ်သားနိုင်ရန် နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအလိုက်ယူဆထားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းများရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ (၄) ဂဏန်းကို ကံမကောင်းစေတဲ့နံပါတ်အဖြစ် လက်ခံထားကြပါတယ်။ (၄) ဆိုတဲ့ဂဏန်းဟာ တရုတ်အသံထွက်အရ သေဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ ဝေါဟာရနဲ့ တူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင် (၄)နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အရာတွေကို လျစ်လျူရှုထားလေ့ရှိကြပါတယ်။ အခန်းနံပါတ်၊ တိုက်နံပါတ်၊ ဓာတ်လှေကား …….။ အဓိကအားဖြင့် ဟိုတယ်တွေမှာဆိုရင် (၄) (၁၄) (၂၄) အစရှိတဲ့ အခန်းနံပါတ်တွေ၊ အလွှာတွေကို အခြားနံပါတ် (ဥပမာ ၄လွှာကို (F Flr) အစရှိသဖြင့်) အစားထိုးအသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ ကားနံပါတ်တွေမှာဆိုရင်လည်း (၄)နံပါတ်ပါတဲ့ ကားတွေကို ရှောင်ပြီး ၀ယ်ယူလေ့ရှိကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဂျာမန်လူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ ကံကောင်းစေတဲ့နံပါတ်ပါတဲ့။ အရွက်လေးရွက်ပါတဲ့ Clover ရွက်လေးတွေကို ကံကောင်းစေတဲ့သင်္ကေတအဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိကြတယ်။
ဂျပန်လူမျိုးတွေအတွက်တော့ (၉) ဂဏန်းဟာဆိုရင် ကံမကောင်းစေတဲ့ နံပါတ်ပါ။ နှိပ်စက်ခြင်း၊ ဆင်းရဲဒုက္ခ အစရှိတဲ့စကားလုံးတွေရဲ့ အသံထွက်နဲ့တူတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးရုံတွေ၊ လေကြောင်းလိုင်းတွေမှာဆိုရင် နံပါတ်(၉)ကို ရှောင်ရှားလေ့ရှိကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း တရုတ်လူမျိုးတွေအတွက်တော့ နံပါတ်(၉)က ကံကောင်းစေတဲ့နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံခြင်းလို့ ယူဆကြတယ်။ ဒဏ္ဍာရီလာပုံပြင်တွေထဲမှာဆိုရင်လည်း ဒီနံပါတ်(၉)က စိုးမိုးထားတယ်။ ဥပမာ စွမ်းအားကြီးမားလှတဲ့ အမြီး(၉)ချောင်းပါတဲ့ ၀ံပုလွေပေါ့….
အီတလီလူမျိုးတွေအတွက်တော့ (Friday – 17) ကတော့ ကံမကောင်းစေတဲ့နံပါတ်ပါ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ရောမနံပါတ် XVII ကို ပြန်ပြောင်းပြီး အစီအစဉ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင် VIXI ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ “ငါ့ဘ၀ကုန်ဆုံးပြီ” လို့ လက်တင်ဘာသာစကားနဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
နော်ဝေ၊ ဆွီဒင်နဲ့ ယူကေကဲ့သို့သော ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများအပါအ၀င် ကမ္ဘာအနှံ နိုင်ငံများစွာမှာတော့ (၁၃)သည် ကံမကောင်းတဲ့ နံပါတ်တစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူပြီး ရှောင်ရှားကြတယ်။ ယေရှုခရစ်၏ (၁၃)ယောက်မြောက် သာဝက “ယုဒရှကာရုတ် - Judas Iscariot” သည် ယေရှုကို သစ္စာဖောက်ခဲ့သည်။ ယေရှုသခင်အား ၁၃ရက်နေ့ (သောကြာနေ့တွင်) ကားတိုင်တင်သတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည့် နေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
အင်ဒီးယန်းများအတွက်ကတော့ (၂၆)ကို ရှောင်ရန် မည်သည့်အရာကိုမဆို ကြိုးစားကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်အပျက်အများကြီးက ဒီ (၂၆)ရက်နေ့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့လို့ပါပဲ။ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ၊ ဆူနာမီနဲ့ မြေငလျင်တွေ….
အာဖဂန်နစ္စတန်မှာတော့ နံပါတ်(၃၉)ကို ကံမကောင်းဘူးလို့ သတ်မှတ်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဒေသိယစကားအရ “Morda-gow” (Dead Cow) နဲ့ အသံထွက် ဆင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာတော့ ကျမ်းစာရဲ့ဗျာဒိတ်တော်မှာဖော်ပြထားတဲ့ သားရဲ (Antichrist (အန္တိခရစ်)) ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ နံပါတ် (၆၆၆) ကို နိမိတ်ဆိုးလို့ ယူဆကြပါတယ်။ ၆၆၆ အရေအတွက်ကို ကြောက်ရွံခြင်း (Hexakosioihexekontahexaphobia) လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဖုန်းနံပါတ် 0888 888 888
လူတော်တော်များက နံပါတ်တွေထပ်နေတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို လိုချင်ကြပေမယ့် ဘူဂေးရီးယားမှာတော့ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုဖုန်းနံပါတ်တွေဟာ ကျန်ဆဲခြင်းခံရသော ဖုန်းနံပါတ်တွေဖြစ်တေယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုဖုန်းနံပါတ်ရှိသူအချို့ ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ကြတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
လူအများစုက နံပါတ်(၃)က ကောင်းသောအရာများစုဝေးနေတယ်လို့ ယူဆကြတယ်။ အထူးသဖြင့် ဆီဒင်၊ ကိုရီးယား လူမျိုးတွေဟာ နံပါတ်(၃)ဟာ သူတို့အတွက် ကံကောင်းခြင်းများစုနေတဲ့ နံပါတ်အဖြစ် မှတ်ယူကြတယ်။ ကိုရီးယားလူမျိုးတွေက နံပါတ်(၃)သည် မြေနှင့်ကောင်းကင်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းသင်္ကေတ - (၁) က ကောင်းကင်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး (၂)က မြေကြီး (ကမ္ဘာ)ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ထို (၁+၂) ပေါင်းလိုက်လျှင် နံပါတ်(၃)ရသည်။
အီတလီလူမျိုးများအတွက် နံပါတ်(၃)သည် ဟန်ချက် (Balance) + စွမ်းအား (Strength) အား ကိုယ်စားပြုသည့် တြိဂံတစ်ခုအဖြစ် ကိုယ်စားပြုကြသည်။
သို့သော် ဂျပန်နှင့် ဗီယက်နမ်တို့တွင် လူ(၃)ဦး အတူ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ထိုသို့ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးလျှင် ဓာတ်ပုံအလယ်ရှိ မည်သူမဆို သေကြလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဂျပန်၊ တရုတ်ကဲ့သို့သော နိုင်ငံများတွင် နံပါတ် (၇)ကို ကံကောင်းခြင်းဟု ဆိုကြသည်။ ထို့အတူ နယ်သာလန်၊ ပြင်သစ်၊ ယူကေ နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ အစရှိသော အနောက်နိုင်ငံများတွင် (၇)မှာ ကံကောင်းသည်ဟု ယူဆကြသည်။ ဂြိုဟ်(၇)လုံး၊ အံ့ဖွယ်(၇)ပါး နှင့် စင်္ကြာဝဠာတစ်ခုလုံးကို ဖန်တီးရန် (၇)ရက် …. အစရှိသည်တို့နှင့် ဆက်စပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော် တရုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသော ထိုင်းနှင့်ဗိယက်နမ်တို့တွင် (၇)သည် ကံမကောင်းသော နံပါတ်ဖြစ်သည်။ နံပါတ်(၇)သည် ဇူလိုင်လကို ကိုယ်စားပြုပြီး သေဆုံးသူ မိတ်ဆွေ၊သူငယ်ချင်း၊ ဆွေမျိုးများအား အမှတ်တရနှင့် အခြားသူများကို မခြောက်လှန့်နိုင်အောင် မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် အစားအစာများ၊ အသီးအနှံအမျိုးမျိုးနှင့် အောင့်မေ့ပွဲများ ပြုလုပ်ရသည့် လ (ဇူလိုင်လ) ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ဟိန္ဒူ၊ ဗုဒ္ဓ၊ ဂျူး၊ ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်နှင့် တိုအိုဘာသာ အပါအ၀င် ကမ္ဘာအနှံအပြားရှိ ဘာသာတရားများစွာသည် (၈)ကို အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသော အရေအတွက်ဟု ယူဆကြသည်။ တရုတ်လူမျိုးများသည် နံပါတ်(၈) ကို အထူးနှစ်သက်ကြသည်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု ဆိုသည့် ဝေါဟာရနှင့် အသံထွက်ဆင်တူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နံပါတ်(၈)နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် အလွန်အဖိုးတန်သော ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သည်။ ဥပမာ ပေကျင်းတွင် ကျင်းပသော ၂၀၀၈၊ သြဂုတ်လ နွေရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်ကို 08း08း08) ဒေသစံတော်ချိန်တွင် စတင်ခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်လည်း (ya or hachi) လို့ ခေါ်တဲ့ ကံကောင်းခြင်းလို့ ယူမှတ်ကြတယ်။ ကံ+ပေါင်းသင်းခြင်း ကို ကိုာ်စားပြုသည့် ဂျပန်စကားလုံးများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကဲ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ကံကောင်းစေတဲ့၊ ကံမကောင်းစေတဲ့ နံပါတ်တွေကရော ဘာတွေလည်း????